जगन्नाथ रात्रि यात्रा 2019
के तपाईं हिन्दू धर्मको साँचो अनुयायी हुनुहुन्छ? तपाईंको जीवनकालमा भ्रमण गर्ने एक धार्मिक स्थान खोज्दै, थप्नुहोस् जगन्नाथ रात्रि यात्रा 2019 तपाईंको सूचीमा! खैर, पुरी राथा योत साँच्चै केहि चीज हो कि कम से कम एक पल्ट जीवन भर मा।
SandPebbles को लागि अद्भुत प्याकेज प्रदान गर्दछ जगन्नाथ रात्रि यात्रा ताकि तपाईं शहर को व्यस्ततम घण्टा को समयमा एक परेशानी मुक्त यात्रा र आवास हुन सक्छ। चाहे तपाईं भुवनेश्वर देखि यात्रा गर्न वा पुरी रथ यात्रा को शहर मा रहन चाहानुहुन्छ, हामी होटल को बुकिंग, दौरे र सबै को यात्रा गर्न को लागी सबै व्यवस्था को सम्झना गर्छन, तपाईंको ईश्वरीय यात्रा को यादगार बनाउन को लागी। हाम्रो जगन्नाथ गणतयात्रा 2019 प्याकेज समावेश छ:
हाम्रो प्रतिनिधि मध्ये एक तपाईंलाई Biju Patnaik अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, भुबनेश्वर मा र तपाईंलाई होटल मा अनुरित गर्दछ। यदि उडान बिहान आउछ भने, तपाईं स्मार्ट सिटी भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ वा पुरी छोड्न सक्नुहुन्छ, यो केवल 60 किलोमिटर शहरबाट ड्राइभ हो। डिनर होटलमा सेवा हुनेछ।
नाश्ते को एक सुन्दर र रंगीन मार्ग मा पुरी को ड्राइव पछि। दुधली, अशोकन रक एडिक्ट र शान्ती स्टोपापा, पाइप्लिली, एक अपप्लिकिक कार्य गाँउ, सखिगोपाल, जो चित्रकारी गाँउमा राधा कृष्णा मन्दिर र रघुराजपुर हो। पुरी आइपुग्दा होटलमा चेक गर्नुहोस्। प्रत्यक्ष आलाती डाशनमा भाग लिन भगवान जगन्नाथ मंदिरको भ्रमण साँझ। त्यस पछि, होटल को कोठा मा रात को खाने को लागि र रातभर रहन को लागि।
नाश्ता ड्राइव पछि पुरी बदडांडा सम्म। राथ यात्रा हेर्नको लागि होटलको छतमा एक विशेष व्यवस्था गरिएको थियो। यदि तपाइँ राथितलाई राम्ररी बाट राम्ररी हेर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया बिहान बिहान सुरू गर्नुहोस्। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि नाश्ता प्याकेट, पानीको बोतल, लन्डन लन्च तपाईं प्रदान गरिनेछ। साँझमा तपाईं खानाको लागि र आरामको निन्द्रा होटलमा फर्कनुहुनेछ।
नाश्ते पछि, भ्रमणको लागि तयार हुनुहोस्। नरेंद्र पोखररी, लुननाथ मंदिर, मार्कन्देश्वर मन्दिर, लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर, गुन्डिचि मंदिर, स्वागदवार, रघुराजपुर कलाकार गाँउ, बिमला मन्दिर र धेरै अधिक भ्रमण गर्नुहोला। रातको खाना र शुभ राती निद्राको होटलमा फर्कनुहोस्।
तपाईं समुद्र तटमा मजा लिनुहुनेछ। अनगिन्ती तीर्थयात्रीहरूको लागि एक ठाउँ, जो पारंपरिक शुद्धि डिपार्टमेन्ट डुब्न आउँछन्। भारतमा सबैभन्दा उत्तम सिलोरी समुद्र तट मध्ये एक, जहाँ बेग बईको लापता पानीले उनीहरूको सुन्दरतालाई परास्त गर्छ। तपाईं समुद्र तट को सामने बर्फीनी शाफ्ट लहरों को मजा आइसक्रीम र अन्य खाद्य वस्तुहरु लाई आनंद ले सकते हो या पुरी-कोर्नर्क समुद्री समुद्री सडक को लागि एक लंबी ड्राइव मा जा सकते हो।
तपाईंको मन नपराउनुहोस् पसल। एक पुरी वरिपरी शिल्प भेट्न सक्दैन। निषेध चांदी आभूषण को लागी हेर्नुहोस् र समबलपुर र बोम्काई बुवाहरू पनि खरीद गर्नेछौं तपाईले आफ्नो जटिल कामको साथ चकित पार्नुहुनेछ।
कोरीर्कमा ड्राइभ गर्नुहोस्, पुरी-कोर्नर्क समुद्री समुद्री ड्राइवको अद्भुत दृश्य दृश्यको आनन्द लिनुहोस्। राथा यात्रा उत्सवमा भाग लिनु, पुरीका यात्रीहरू केहि अन्य पर्यटक पर्यटक विकल्पहरू हेर्न सक्छन्। पुरी बीच, कोनर्क बीच, कनार सुप मंदिर पुरी वरिपरि सबैभन्दा आकर्षक पर्यटक आकर्षणहरु मध्ये केहि हुन्। नाश्ता भ्रमण पछि कोनर्क सूर्य मंदिर, एएसआई संग्रहालय (शुक्रबार शुक्रबार), रामचन्द मंदिर र चन्द्रबाभा समुद्र तट। दिउँसो, सुनको समुद्र तटमा आफैलाई रमाइलो र पुरीको समुद्र तट बजारमा आराम गर्नुहोस्। तपाईं रातभर राती पुरीमा बस्नु हुनेछ।
नाश्ता पछि, तपाईंलाई समय समयमा भुवनेश्वर एयरपोर्ट वा आगामी यात्राको लागि रेलवे स्टेशनमा पठाइनेछ।